गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जागिरे मानसिकता त्याग्नुपर्छ: शिक्षाविद् कोइराला | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जागिरे मानसिकता त्याग्नुपर्छ: शिक्षाविद् कोइराला
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जागिरे मानसिकता त्याग्नुपर्छ: शिक्षाविद् कोइराला
२०७५, २९ मंसिर शनिबार २१:४६
जागिरे मानसिकताका शिक्षक र राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनाउने ब्यवस्थापन समितिले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा अवरोध गरेको शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइरालाले बताए । शिक्षामा गुणस्तरीयता ल्याउन प्रअ, शिक्षक र समितिका गतिविधिलाई सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
जिल्लाको मंगला गाउँपालिकाले दुईदिनसम्म सञ्चालन गरेको सामुदायिक विद्यालयको शेक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय ब्यवस्थापन समिति, प्रअ, शिक्षक र सरोकारवालाहरु बीच बृहत छलफल कार्यक्रमको सहजिकरण गदैं डा. कोइरालाले पुरानो मानसिकता भएका शिक्षकले आफुँलाई अब्बल दर्जामा राख्न नसक्ने अवस्था आएमा प्रोत्साहन गरी विदाई गर्नुपर्ने बताए ।‘शिक्षकले दलगत मानसिकता पनि त्याग्नुपर्छ,‘नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई दैनिक प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ’ कोइरालाले भने ।
उनले शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीतिक दलले कार्यकर्तालाई नीति स्रोतबाट शिक्षकको रुपमा भर्ना गर्ने गरेको बताए । विद्यालयलाई सुधार गर्न प्रअ र समिति बीचको सहकार्यसंगै शिक्षकलाई समेत कार्यतालिकाको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले विद्यालय देखि विद्यार्थीको घरसम्म शिक्षकको पहुँच हुनुपर्ने बताए । जागिरे मानसिकता त्याग्ने शिक्षकले फुर्सदको समयमा पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागी ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने उनका भनाई छ ।
‘सामुदायिक विद्यालयमा धेरै समस्या छन्,‘जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान पनि शिक्षाको क्षेत्रमा देखिदैन’ डा.कोइरालाले भने । उनले अब्बल शिक्षकलाई स्थानीय तहबाट समेत सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै राम्रा समुदायिक विद्यालयबाट समेत सिक्ने गरी योजना बनाउनुपर्ने बताए । उनले प्रअ र शिक्षक बीचको सहकार्यको अभावले समेत समस्या भइरहेको बताउँदै निर्वाचनमा दलका उम्मेदवारलाई भोट माग्न ब्यस्त हुने प्रअ, शिक्षकलाई अभिभावकले सचेत बनाउनुपर्ने बताए ।
‘विद्यालयको बदनाम गर्ने तत्वको खोजी गर्नुपर्छ,‘जनप्रतिनिधिले आफ्ना गतिविधिलाई समेत विद्यालयसंग जोड्नुपर्छ’ उनले भने । शिक्षकलाई दलको सदस्यता वितरण गर्ने सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेको बताउँदै डा. कोइरालाले शिक्षकले प्रयोग भइरहेको समेत पत्तो नपाएको बताए । शुक्रबारको बृहत्त छलफलमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य, ४० विद्यालयका विब्यस अध्यक्ष, प्रअ, शिक्षक समेत गरी १ सय ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
तालिमको सहजीकरण शिक्षा क्षेत्रकै जानकार धनञ्जय शर्माले समेत गरेका थिए । त्यस्तै शनिबार विद्यालयका प्रअलाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागी प्रअको भूमिका, कार्ययोजना सहितका छलफल गरिएको गाउँपालिकाका शिक्षा संयोजक डेकबहादुर बानियाँले बताए । उनले सामुदायिक विद्यालय भित्रका समस्या, समाधानका उपाय तथा जिम्मेबारी अनु्सारको काम पुरा गर्न नसक्नुको कारणलाई केन्द्रित गरिएको थियो । छलफलको समापन कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले हरेक सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना बनाउनुपर्ने बताए । ‘काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिन्छ,‘विद्यार्थीको भविस्य बनाउने जिम्मेबारी सबैको हो’ रोकाले भने ।
उनले गाउँपालिका भित्र नीति स्रोतबाट सञ्चालिक विद्यालयलाई तलब, नियमित अनुगमन तथा तालिममा समेत प्राथमिकता दिएको बताए । उनले गाउँपालिका भित्र हरेक बर्ष उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई सम्मान गरिने बताए । तालिमको अवसरमा गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको सचिवालयका चन्द्रमणी सापकोटाले प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी समेत गराएका थिए । कार्यक्रमको अध्यक्षता अध्यक्ष रोका, स्वागत उपाध्यक्ष सृजना केसी , तालिमका उदेश्यका बारेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद गौमतले जानकारी गराएका थिए ।
Previous articleतेस्रो होराईजन कप फुटबलको उपाधी प्रकाश माविलाई
Next articleमाउण्ट एभरेष्टका विद्यार्थीले ड्रोन उडाए (भिडियो)